Yariv Erel Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Yariv Erel
Kushambadzira nharembozha kunoenderera kuve imwe yematanho ari kukura nekukurumidza zvikuru uye akaomarara ehupfumi hwepasirese hwekushambadzira. Sekureva kwesangano rekutenga-kushambadzira Magna, kushambadzira kwedhijitari kuchapfuura kushambadzira kwechinyakare kweTV gore rino (nekutenda zvakanyanya kushambadziro mbozhanhare). Na2021, kushambadzira nhare kuchave kwawedzera kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi maviri nemashanu, kana makumi manomwe nezviviri muzana yemadhirama ekushambadzira edhijitari. Saka mhando yako ingamira sei mune ruzha? Iine AI yakanangisa chinhu chete nzira